Onye Ọrụ Mobile | Martech Zone
Tuesday, August 2, 2011 Na Tọzdee, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Ka ọ na-erule afọ 2012, Morgan Stanley na-ebu amụma na mbupu ekwentị ga-akarị na kọmputa. Na mgbakwunye, a na-atụ anya na 25% nke ntanetị ịntanetị niile ga-egbu site na ngwaọrụ mkpanaka. Enweela atụmatụ na 30% nke email ụlọ ọrụ na-agụ na ngwaọrụ mkpanaka. Agbanyeghị na mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ọ na-ebute ụzọ n'ọtụtụ akụkọ… mobile kwesịrị ịbụ uche nke ọma na ụlọ ọrụ ọ bụla.
Mana ụlọ ọrụ ekwesịghị ịdị na-ele anya na ekwentị site na ahịa, ụlọ ọrụ kwesịkwara ịgba ndị ọrụ ha ume ịnabata. Nke a ozi sitere na Dell na-ekwu okwu maka arụmọrụ nke ekwentị site na ọrụ na arụpụta ọrụ. Dị ka infographic na-ekwu, sị:
Oge eruola ka ị chegharịa usoro iwu IT gị ma sonyere ndị ọrụ ọrụ mkpanaka? Lọ ọrụ ndị nwere ike imeghari ngwa ngwa na mpaghara ekwentị mkpanaka ọhụrụ nwere ike ịba ụba ma nwee ọganihu.
Ndị ọrụ nwere ihe ọmụma na-azụ ahịa site na ịnwe njikọ. Ndị ọrụ gị enwere njikọ?
Tags: infographicMobile na Mbadamba ụrọekwentị mkpanaaka infographicmobile ọrụ